Ọ bụrụ na ịchọrọ ihe akaebe ọ bụla maka mmetụta ekwentị na azụmaahịa | Martech Zone
Ọ bụrụ n ’ịchọrọ ihe akaebe ọ bụla maka Mmetụta ekwentị na Azụmaahịa
Friday, December 12, 2014 Friday, December 12, 2014 Douglas Karr
Anyị gabigara otu ogbo na teknụzụ ebe a hụrụ weebụsaịtị dị ka nnukwu ọnụ ụzọ dị n'etiti onye ahịa na azụmahịa. A na-eji ọgbakọ eji eme ihe, Ajụjụ, Ajụjụ enyemaka na email na ntinye nke ebe oku dị oke ọnụ yana oge emetụtara iji dozie nsogbu ndị ahịa.
Mana ndị na-azụ ahịa na azụmaahịa na-ajụ ụlọ ọrụ na-anaghị anara ekwentị. Weebụsaịtị anyị na-eji agagharị agagharị, ekwentị mkpanaka na ụwa mkpanaka ugbu a chọrọ ka mmadụ zaa na nsọtụ ọzọ nke ekwentị ha. Ọbụlagodi na ndị ndu na ndị ahịa anaghị akpọtụrụ gị site na ekwentị - eziokwu bụ na ha nwere ike na-ekere òkè na ntụkwasị obi nke mmekọrịta ahụ - na-emetụta mkpebi ịzụta.
IfByPhone kere ihe omuma ihe omuma nke gosiputara udiri ihe ndi ozo mere ka ha gbanwee ahia. Ha gosiputara stats atọ dị mkpa maka ndị ahịa niile - ọ bụghị naanị ndị nwere oke na mkpọsa - ka ị tụlee mgbe ị na-eche maka azụmaahịa ekwentị.
30 ijeri inbound ahịa oku emere site na nyocha mkpanaka na US na 2013 ma a na-atụ anya ijeri 73 na 2018.
70% nke ndị na-enyocha ekwentị nwere pịa bọtịnụ Oku na nsonaazụ ọchụchọ dịka Google.
61% nke ndị ahịa kwenyere na ọ dị mkpa na azụmaahịa na-enye ha nọmba ekwentị ịkpọ oku na 33% kwuru na ha agaghị enwe ike iji ma zoo ụdị ndị na-emeghị.
IfByPhone na-enye usoro mmezi ahịa nke olu nke na-enye ụlọ ọrụ ohere ijikọ, tụọ ma bulie ahịa na oku ọrụ.
Tags: ifbyfongwa ahiamkpanaka mpaghara searchnjikarịcha ekwentịmobile ịzụtamkpọsa ekwentịmkpanaka ọchụchọmkpebi ịzụta
The Top 15 Email Marketing Echiche You Kwesịrị Knowmara
Kedu ihe bụ Slogan? Isiokwu ndị a ma ama na Evolution